गुल्मीको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसको निर्वाचनको तयारी तिव्र ! – ebaglung.com
गुल्मीको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसको निर्वाचनको तयारी तिव्र !
२०७६ असार २२, आईतवार २०:२६	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
मनु सुनार, गुल्मी २०७६ असार २२ । गुल्मीको रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पस सञ्चालक समितिको निर्वाचनको तयारीलाई तिव्र पारिएको छ । यस अघि नै गर्ने भनिएको क्याम्पस सञ्चालक समितिको निर्वाचनका लागि ३४ औँ क्याम्पस सभाको निर्वाचन कार्यक्रम प्राविधिक कारणवश स्थगित भएको थियो । निर्वाचनलाई व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको हो ।
यहि असार २५ गते नयाँ सञ्चालक समितिको चयनका लागि निर्वाचन हुने रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पस निर्वाचन समितिले जनाएको छ । जसअनुसार सोही दिने बिहान ८ बजे देखी ८ः३० सम्म मतदाता नामावली उपर छुट वा दाबी विरोध गरीने छ ।
मतदाता नामावली उपर दाबी विारेध माथि छानविन विहान ८ः४५ बजेदेखि ९ बजेसम्म,अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन बिहान ९ बजे,उम्मेद्धवारी मनोनयन दर्ता बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म,उम्मेद्धवारीको नामावली प्रकाशन बिहान ११ः१५ बजे गरीने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
यस्तै उमद्धवारी उपर दाबी विरोध बिहान ११ः३० बजेसम्म,उम्मेद्धवारको मनोनयन फिर्ता दिउँसो १२ः३० बजे तथा अन्तिम उम्मेद्धवारको नामावली प्रकाशन पनि सोही समयमा गरिने छ । भने दिउँसो १ः३० बजेदेखि ५ःबजेसम्म मदातान चल्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
निर्वाचनको मिति नजिकिन थालेसँगै निर्वाचनको तयारीलाई तिव्र पारिएको क्याम्पस प्रमुख हरि बहादुर खत्रीले बताए । अहिले क्याम्पस सम्पुर्ण ढङ्गले निर्वाचन होमिएको छ, उनले भने ‘जिल्लाको शैक्षिक धरोहरका रुपमा स्थापित छ । निर्वाचन कार्यतालिका पनि सार्वजनिक भएको छ ।’
क्याम्पस प्रमुख खत्रीले समुदायस्तरबाट सञ्चालन भएको क्याम्पस भएकाले सकेसम्म सहमतिय ढङ्गले नेतृत्व आउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको विश्वास गर्दे ‘जसरी आए पनि क्याम्पसका विकासका लागि काम गर्ने हो, क्याम्पस सञ्चालनका विभिन्न चुनौतीहरु भएको उल्लेख गरे ।
पछिल्लो समय बिद्यार्थीहरुको संख्या कम हुँदै गएकोले क्याम्पसमा बिद्यार्थीहरुको भर्नादरलाई वृद्धिका लागि क्याम्पस सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरु मिलेर अगाडी बढ्ने बताए ।
पहिलो त क्याम्पसका केही नितिहरुको सुधार गनुपर्ने छ । समुदायस्तरबाट सञ्चालन भएकाले आर्थिक व्यवस्थापनका लागि पनि योजना बनाउनु पर्ने छ क्याम्पस प्रमुख खत्रीको भनाई छ ।
उनले क्याम्पसमा निकट भविष्यमै छात्राबास सञ्चालनका लागि यसको व्यवस्थापनका लागि निरन्तर छलफल हुँदै आएकोले यसलाई पुर्णता दिने नयाँ नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी रहने पनि बताए ।
क्याम्पसका सुचना अधिकारी चनक कुवँरले क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तरका लागि अब नयाँ ढङ्गले बढ्ने जानकारी दिए । ‘भर्खरै क्याम्पसले क्यू.ए.ए प्राप्त गरेको छ यसलाई संस्थागत गर्नुछ । शैक्षिक गुणस्तरलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कार्यदिशा कोर्नु छ । आर्थिक सङकटलाई टाल्नु छ । अब निर्माण हुने सञ्चालक समिति त्यसतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको कुवँरले जानकारी दिए । क्याम्पसको निर्वाचनको कार्यक्रम २०७५ चैत्र २९गते देखि प्रारम्भ भएको थियो ।